पत्र-पत्रिका Archives ⋆ Page 63 of 64 ⋆ Palpalko.com::No.One news portal from nepal.
फ्रि भिसा–फ्रि टिकट हटाउन ‘चलखेल’
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको दबाबमा सरकारले ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’को प्रावधान हटाउने तयारी गरेको छ। व्यवसायीसँगको वार्तामा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय लचिलो हुँदै गएको र पर्याप्त सेवा शुल्क लिन पाउने छुट केही दिनभित्र दिने स्थितिमा पुगेको स्रोतले बतायो। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले…
मेलम्चीको आशमा राजधानीबासी,पानीका लागि अझै एक वर्ष कुर्नुपर्ने
२१ चैत । मेलम्चीको पानी आउने आशामा बसेका राजधानीबासीले अझै एक वर्ष कुर्नुपर्ने भएको छ। निर्माण अवधि बढेसँग लागत पनि एक अर्ब रुपैंया थपिने भएको छ। निर्माणको ठेक्का पाएको कम्पनीको धिमा गति, भुकम्प र भारतको नाकाबन्दीका कारण काम अवरुद्ध भएपछि निर्माणमा ढिलाई…
कांग्रेस र मधेसी मोर्चाद्वारा भारत-र्इयु संयुक्त वक्तव्यको समर्थन
२१ चैत । भारत र युरोपेली युनियन (ईयु)ले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत नेपालको संविधानबारे प्रतिकूल टिप्पणी गरेको भन्दै सरकार र वाम दलबाट तीब्र आलोचना भइरहँदा प्रमुख पतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र मधेसी मोर्चा विज्ञप्तिको समर्थनमा देखिएका छन्। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ। नेकपा मालेका अध्यक्ष…
गिरिजाप्रसाद कोइालाको योजनामा ४२ वर्ष अघि अपहरण गरिएको जहाज सुन्दरीजलस्थित वीपी संग्रहालयमा राखिने
काठमाडौँ, २० चैत ।कांग्रेसका तत्काली नेता गिरिजाप्रसाद कोइालाको योजनामा ४२ वर्ष अघि अपहरण गरिएको जहाज सुन्दरीजलस्थित वीपी संग्रहालयमा राखिने भएको छ। कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ। संग्रहालयका संरक्षक परशुराम पोखरेलले २ वर्ष अघि अर्घाखाँचीको मसिने लेकमा दुर्घटनामा परेर क्षतिग्रस्त विमानलाई संग्रहालयमा राखिने जानकारी…
अबको चुनावमा नो भोट, मतदाताले उम्मेदवार अस्वीकार गर्न पाउने
काठमाडौँ, २० चैत ।उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्ने मतदाताको अधिकारलाई सरकारले स्थानीय निर्वाचनमा लागू गर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषदले शुक्रबार पारित गरेको स्थानीय निर्वाचन कार्यविधि ऐनको संशोधन विधेयकमा कुनै पनि मतदातालाई मत नदिने अर्थात् सबैलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार मतदातालाई हुनेछ। कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ। ‘चित्त…
भारतीय सीमा सुरक्षा बलले पक्राउ गरेका ३५ नेपालमध्ये ६ जनालाई जेल चलान
काठमाडौँ २० चैत । भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले बुधवार पक्राउ परेका ३५ नेपालमध्ये ६ जनालाई जेल चलान गरेको छ। बाँकी २९ जनालाई १८ वर्षभन्दा कम उमेरको भन्दै त्यहाँको चाइल्ड लाइनमार्फत बाल सुधारगृहमा पठाएको बिहार पुलिसले शुक्रवार जनाएको छ। कान्तिपुर दैनिकमा समाचार…
तीन सातादेखि बन्द म्यानपावर कम्पनी शुक्रबारदेखि खुल्ने
काठमाडौं,१८ चैत । तीन सातादेखि बन्द म्यानपावर कम्पनी शुक्रबारदेखि खुल्ने भएका छन् । आन्दोलनरत् व्यवसायीलाई सरकारले औपचारिक वार्तामा बोलाएपछि काम सुचारु गरी वार्तामा बस्न लागेका हुन् । व्यवसायीका अनुसार कार्यालय खुले पनि पूर्वस्वीकृतिका काम भने गरिने छैन । अन्तिम स्वीकृतिका काम मात्र हुनेछ…
आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने कसरतमा कांग्रेस
काठमाडौं, १८ चैत ।विगतमा गुण र दोषको आधारमा सरकारको आलोचना गर्दै आफ्नो धर्म निभाउने बताउँदै आएको नेपाली कांग्रेसले पछिल्लो समय आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने उदेश्यले सरकार परिवर्तन गर्ने रणनीति बनाएको छ। नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा समाचार छ। कांग्रेसले नयाँ संविधान कार्यान्वयनका…
द्धन्द्धपीडित परिवारका सदस्यालाई स्नातकसम्म नि:शुल्क शिक्षा
काठमाडौँ, १७ चैत । सशस्त्र द्धन्द्धकालका घटनामा पीडित परिवारका सदस्यालाई सरकारले स्नातक तहसम्म नि:शुल्क शिक्षा दिने भएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिसमा सरकारले पीडितको रोजाइअनुसारको शिक्षा,सीपमुलक तालिम लगायतको व्यवस्था गरी नियमावली पारित भएको छ…
होसियार! छातीमा क्यामरा जडित ट्राफिक प्रहरीले समाउला
काठमाडौँ, १७ चैत । सवारी चलाउँदा सडक लेन मिच्दै हुनुहुन्छ ? सावधान! तपाईंको गल्ती अडियो/भिडियोयुक्त क्यामरामा कैद हुनेछ र तुरुन्तै कारबाहीमा पर्नुहुनेछ। भागे पनि ट्राफिक प्रहरीको मोटरसाइकलले पछ्याएरै तपाईंलाई दण्डित गर्नेछ। कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ। लेन मिच्ने र भाग्ने क्रम बढेपछि ट्राफिक…